Ogaden News Agency (ONA) – Geedi-aar oo ciidamada cadawga lagaga dilay 23 askari iyo gaadiid lagaga gubay cadawga meela kala duwan.
Geedi-aar oo ciidamada cadawga lagaga dilay 23 askari iyo gaadiid lagaga gubay cadawga meela kala duwan.
Wararkii ugu dambeeyay aan ka helnay Xarunta dhexe ee JWXO ayaa sheegaya in ciidamada cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare balaadhan dagaal ka dhacay deegaanka Geedi-aar ee degmda Dhagabuur ee gobolka Jarareed ah. Goobtan uu ka dhacay dagaalka ayaa ah duleedka magaalo madaxda gobolka, waxayna kaga toosan tahay dhinaca waqooyi iyadoo u jirta ku dhawaad 15 km.
Dagaalkan oo dhacay 20 Novenber 2011 ayaa ahaa mid si fiican loo diyaariyay iyadoo ciidamada cadawga lagaga dilay in ka badan 23 askari halka dhaawucuna uu kor u dhaafay 30 askari. Naftood-hurayaashii CWXO ee galay dagaalkaas ayaa goobtaa kula wareegay sanaad ciidan oo badan oo ka kooban noocyada hubka fudud iyo daawooyin iyo agab ciidan oo farabadan.
Dhanka kale waxaa lagu gubay gaadiid noocyada ay ciidamadu isticmaalaan deeganada kala ah Karinka sollo oo katirsan Dhagaxbuur, Birqod oo ka tirsan Dhagabuur iyo Duudciid oo ah duleedka magaalada Qabridahar. Sida uu nasoo gaadhsiyay wariyaha nooga soo warama dalka guduhiisa, ma jiraan wax ka baxay baabuurtan iyo wixii saraa.
Wararku waxay intaa ku darayaan inay jiraan dagaalo kale oo dhacay maalmahan kuwaas oo dhexmaray CWXO iyo kuwa cadawga waxayna u kala dhaceen sidan;
26/11/2011dagaal ka dhacay Atoorka oo ka tirsan degamada Dhagax madow waxaa ciidamada cadawga lagag dilay 1askari.
19/11/2011 dagaal ka dhacay Dula-miin oo ka tirsan degmada Baabili waxaa ciidamada cadawga lagaga 4 askari
14/11/2011 dagaal ka dhacay Walwaal oo ka tirsan Doollo waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay kamiin loo dhigay 2 askari 3 kalena waa lagaga dhawaacay.
21/11/2011 dagaal ka dhacay Xero jabhad oo ka tirsan degmada Wardheer waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 3 askari.
28/11/2011 dagaal ka dhacay Gubadguun oo ka tirsan deegaanka Gurdumi ee degmada Aware waxaa ciidamada cadawga lagaga 5 askari .
27/11/2011 dagaal ka dhacay Dhuure oo ka tirsan degmada Qabri dahar waxaa ciidamada cadawg lagaga dilay 2 askari 2 kalena waa lagaga dhaawacay.
25 /11/2011 dagaal ka dhacay Balanbal oo ka tirsan Galadiid ee degmada Qabridahar waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 3 askari.
20/11/2011 dagaal ka dhacay Hadhaawe-lamu oo ka tirsan degmada Fiiq waxa cadawg lagaga dilay 1askari.
Wararku waxay intaa ku darayaan inay jiraan dagaalo badan oo isugu jira mir habeenimo iyo kamiin maalino oo loogu gaystay cadawga khaasre kala duwan , kaas oo aan ku faahfaahin doono wararkreena danbe, deegaanadaana waxaa ka mid ah ; Haramaayo,Caado, guduuda, maroodiga,daayaale,dibiryare iyo buundada qoraxay oo mir habeen oo loo gaysay lagu gubay guryo uu daganaa cadawgu iyo meelo kale.
Waxaa jira sidii caadada cadawga u ahayd in marka ay waxyeelo ka soo gaadho gacanta CWXO inuu dib ugu gadoodo shacabka birmagaydada ah ee aan waxba galabsan kaasoo uu kula kaco dil, jidh-dil, xadhig, kufsi ,iyo dhac ama boob hantiyeed. Warbixinadii ugu dambeeyay ee tacadiyadaa ku saabsan ayaad ka dhagaysan doontaan idaacadaha iyadoo loo gudbin doono haya’adaha caalamiga ah ee qaabilsan xuquuqul insaanka.